onlineakhabar.com: OMG मुटु दह्रो हुनेले मात्र हेर्नुहोस् !!! एक युवति चौथो तलाबाट यसरी हामफालिन्... (भिडियो)
Banner, Caught on camera, India News, International, Main News, Video, Viral News, Viral Video » OMG मुटु दह्रो हुनेले मात्र हेर्नुहोस् !!! एक युवति चौथो तलाबाट यसरी हामफालिन्... (भिडियो)
OMG मुटु दह्रो हुनेले मात्र हेर्नुहोस् !!! एक युवति चौथो तलाबाट यसरी हामफालिन्... (भिडियो)
यस्तो डरलाग्दो दृश्य जुन हामीले फिल्ममा मात्र देख्ने गरेका हुन्छौ । जुन दृश्य फिल्ममा बिभिन्न इफेक्सको प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ । तर यहाँ एउटा त्यस्तो भिडियो छ जुन हेर्दा जो कोहिको पनि सातो जान सक्छ । शायद यस्तो डरलाग्दो मृत्युको भिडियो कमै मानिसले देखेका होलान् ।
भारतकै कुनै एक ठाउँको दृश्य देख्न सकिन्छ । उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक संजालमा राखिएको भए पनि घटनाको बिस्तृत भने खुलाइएको छैन । यो भिडियो यतिबेला सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको छ । उक्त भिडियोलाई भारतकै एक अनलाई पत्रिका पंजाब केसरी ले राखेको थियो । हेर्नुहोस् तपाई पनि उक्त भिडियो :
Tags : Banner Caught on camera India News International Main News Video Viral News Viral Video